HOR DHAC: Liverpool Vs. Manchester United – Gool FM
HOR DHAC: Liverpool Vs. Manchester United
Kaafi October 17, 2016
(Liverpool) 17 Okt 2016. Liverpool waxa ay soo dhaweyn doontaa cadawgeeda kowaad kulanka sideedaad ee Premier League-ga kolkan.
Hadii ay Reds guul daarto, waxa ay la dhibco noqon doontaa kooxaha ugu sareeya horyaalka ee kala ah Manchester City iyo Arsenal oo min 19 dhibcood leh.
-Jurgen Klopp waxa uu la daalaa dhacayaa taam ahaanshaha Adam Lallana iyo Georginio Wijnaldum kahor kulanka caawa ee Manchester United.
-Lallana waxa uu seegay kulamadii xulkiisa kaddib markii uu dhaawacmay qeybtii hore ee ciyaartii Swansea laba toddobaad kahor, halka Wijnaldumku qasbanaaday in uu muruq booday awadiis uga baxo is aragii Netherlands iyo France.
-Labaduba shaki weyn ayaa kulankan uga jira balse waxaa badal u noqon kara Emre Can oo ciyaartiisii ugu horreeysay ololahan ku soo bilaabanaya.
-Weyne Rooney waxaa la filayaa in uu baaqi ku ahaado keydka marka Manchester United ay u safarto Liverpool isniinta. Jose Mourinho waxa uu si la yaab leh u safi karaa Marouane Fellaini, kaas oo kulamada Liverpool bandhigto fiican ka sameenayey.
– Luke Shaw and Henrikh Mkhitaryan labada taam ahaansho ayey dhibaato kala kumayeen ololahan laakiin halis ciyaartan laguma galin karo.
-Guul darro Liverpool soo gaarta waxa ay ka dhigan tahay markii ugu horreeysay oo ay saddex kulan oo xiriir ah gurigeeda United ku garaacdo tan iyo 2005.
-United wey badisay afartii kulan ee ugu dambeeysay ee ay Liverpool la dheeshay , toddobo marka ay timaado sagaalkii la soo dhaafay.
-Liverpool 67 jeer ay karbaash kala kulantay United, waana tirada ugu badan ee ay koox ka badisay.
-Steven Gerrard oo dhaliyey sideed, ayaa ah gool dhaliyaha is aragan ugu sarreeya, Robbie Fowler iyo Weyne Rooney waxa ay leeyihiin min 6 gool.
-Jurgen Klopp kaliya kulan ayuu guul darreeystay 5tii kulan ee uu ka hor yimi Jose Mourinho.
Dhex dhexaadiyaha: Martin Taylor
Sergio Aguero ayaa RIGOOROOYINKA u tuuri doona Man City ilaa uu isaga iska dhiibo
Klopp: Waxa qura ee aan ballan qaadi karo khaor kulanka United.....?